Uyenza njani ibhokisi udibanise ukungcamla okwenziwe ekhaya (iingcebiso ezi-5) - Ibhlog
Uyenza njani ibhokisi yokuxuba incasa eyenziwe ekhaya
Uyenza njani ibhokisi yokudibanisa incasa eyenziwe ekhaya ngamanyathelo ama-5 alula
Le yindlela yokwenza ibhokisi yokuxuba incasa eyenziwe ekhaya. Nina niyazi, akukho mntu uyithandayo ikeyiki eyenziwe kwangoko kunam! Kodwa ngamanye amaxesha, ndiye ndiphume ngaphandle komxube webhokisi. Ngokwesiqhelo velvet ikeyiki ebomvu okanye ikeyiki yetshokholeyithi xa ndifuna incasa emnandi kodwa ndingenalo ixesha lokubhaka kwasekuqaleni. Okanye mhlawumbi andinazo zonke izithako ezandleni endizifunayo. Oko kuyenzeka KUNINZI.
Kodwa ndisafuna la flavour imnandi! Andiyithandi kwaphela incasa 'yemichiza' enokuvela kwibhokisi ethe tye ke nazi iingcebiso zam zokwenza ibhokisi ngokudibanisa incasa eyenziwe ekhaya.
Musa ukoyika umxube webhokisi
Kukho impikiswano engapheliyo malunga nento engcono, ukuxuba ibhokisi okanye ukubhaka ukususela ekuqaleni. Baninzi abantu abaya kulwa ezantsi ekunene ukuya ekufeni ngenxa yale. Ukunyaniseka, ngubani okhathalayo?
Sebenzisa umxube webhokisi kukuwe. Ngokuqinisekileyo iyindlela emfutshane kwaye ngamanye amaxesha yeyona ndlela ilungileyo. Uninzi lwabahlobisi bekhekhe abaqeqeshiweyo phaya ngaphandle basebenzise umxube webhokisi efundisiweyo kuzo zonke iikeyiki zabo. Ufumana iziphumo ezingqinelanayo kwaye yindlela elula yokuxuba.
Ekuphela kwento endikucebisa ukuba ube phambili kubathengi bakho. Kweminye imimandla, akukho mntu unokucinga ukuba usebenzisa ibhokisi okanye ukuba wenze ikhekhe ekuqaleni. Kodwa kwindawo yam (ePortland) abantu baxhalabile kakhulu malunga nento abayifaka emzimbeni wabo (iPortlandia yinyani yokwenyani).
Abaxhasi baya kundithumelela i-imeyile ukuze baqinisekise ukuba ndibhaka kwasekuqaleni. Ke ndiqinisekile ukuba ndibeka olo lwazi kwiwebhusayithi yam ukuze kungabikho mbuzo. Ukuba usebenzisa ibhokisi edityanisiweyo akufuneki uthethe ngamagama amaninzi. Unokuthi 'ubhakwe ngokutsha yonke imihla' kwaye ukuba unemibuzo ethile malunga nokubhaka ukusuka ekuqaleni, yinyani.
Ukuba ufuna ezinye iiresiphi malunga nendlela yokubhaka ukusuka ekuqaleni, jonga ukuzama kwam nokunyaniseka ikeyiki zokupheka kuMdlalo weSwekile Geek.
Ingcebiso # 1 yokwenza ibhokisi yokuxuba incasa eyenziwe ekhaya
Qala ngomxube webhokisi efanelekileyo. Ndiyintombazana yakwaDuncan Hines mna. Ixabiso libiza kancinci kunebhokisi exutywe ngexabiso eliphantsi kodwa ndiyakholelwa ukuba uyakufumana oko ukuhlawulayo. Ukungachazi UDuncan Hines zihlala zithengiswa ukuze ugcine isitokhwe kwiincasa zakho eziphezulu kwaye wonwabele zonke iinkangeleko ezihlekisayo oza kuzifumana.
I-flavour yam ye-Duncan Hines endiyithandayo yi-Velvet ebomvu, i-Chocolate e-Triple, i-Cake emhlophe (yokwenza i-WASC) kunye ne-strawberry. Ngelinye ixesha andifumani duncan hines sitrobheli ngoko ndiza kuhamba noBetty Crocker. Zonke ezi ziindlela zokupheka ezithatha itoni yexesha ukwenza kwasekuqaleni kwaye zezona zivumba ziceliweyo kubathengi bam. Kwinguqulelo yetshokholethi yale recipe jonga eyam Iresiphi yetshokholethi yeWASC
Ingcebiso # 2 ngendlela yokwenza ibhokisi udibanise incasa eyenziwe ekhaya
Ngokwesiqhelo umxube webhokisi unezinto zilandelayo ezidweliswe ngasemva abafuna ukuzongeza. Amaqanda, amanzi kunye neoyile. Oku kububulumko kwisiphelo sabo kuba wonke umntu unazo zonke ezi zinto sele zikhona.
Into malunga nezi zithako nangona kunjalo, ayongezi kangako kwikhekhe ngokokufika kwencasa.
Faka amanzi endaweni yobisi ukuze ufumane incasa engakumbi kunye nokufuma. Ukuba wenza ivelvet ebomvu ungasebenzisa ibhotolo.
Faka ioyile ngebhotolo enyibilikisiwe ukuze ufumane incasa engakumbi kunye nokuhombisa okwenziwe ekhaya
Kwiikeyiki zetshokholethi, zama ukutshintsha amanzi ngekofu epholileyo. Ikofu iqinisa incasa yetshokholethi! Fumana iresiphi I-WASC yetshokholethi
Ingcebiso # 3 yendlela yokwenza ibhokisi yokuxuba incasa eyenziwe ekhaya
Usenokuba uvile INKUNKUMA (I-almond emhlophe ikhekhe elimuncu) kwaye wazibuza ukuba yintoni. Yeyona nto ilunge kakhulu yebhokisi enengxubevange yexesha lonke. Incasa, uburhabaxa kunye nencasa yale khekhe KUKUFELA. Akumangalisi ukuba iresiphi yokukhetha xa ufuna ikhekhe emhlophe egqibeleleyo kubabhaki abaninzi.
Uyenza njani i-WASC
Qala ngebhokisi enye yomxube omhlophe weDuncan Hines
Yongeza kwikomityi enye yomgubo we-AP
1 indebe yeswekile eyakhiwe
1/4 tsp ityuwa
1 indebe ukhilimu omuncu
I-1/2 indebe inyibilikile ibhotolo
1 indebe yamanzi okanye ubisi
4 amaqanda abamhlophe
1 tsp isicatshulwa seamangile
Beka zonke izithako zakho kwisitya somxube wakho wokuma (okanye ungadibanisa ngesandla) kwaye ugxobhoze ezantsi ukudibanisa de kube kufakwe amanzi. Emva koko bump ukuya kwisantya esiphakathi kwaye udibanise imizuzu emi-2 ukuphuhlisa ubume kunye nolwakhiwo lwekhekhe.
Thela ibhetter yakho kwiipani zakho ezilungiselelwe. Ndiyathanda ukusebenzisa Ukukhutshwa kwepanini eyenziwe ekhaya (ikhekhe goop) . Eyona nto ikhutshwa ipani eyenziwe ekhaya ikhona! Bhaka kwi-350ºF imizuzu engama-35 ukuya kwengama-40 de kube kuphume i-toothpick kwiziko ngokucocekileyo.
Vumela ukupholisa ngokupheleleyo ngaphambi kokuhlobisa. Ngolwazi oluthe kratya malunga nokuhombisa ikhekhe lakho lokuqala, jonga uqeqesho lwam lwasimahla malunga nendlela yokwenza ikhekhe lakho lokuqala.
Ingcebiso # 4 ngendlela yokwenza ibhokisi udibanise incasa eyenziwe ekhaya
Yenza i-buttercream yakho ekuqaleni. Ndiyazi ukuba oku kuvakala kungahambelani kuba sizama ukwenza lula apha. Mhlawumbi awuzange wenze i-buttercream eyenziwe ekhaya kwaye woyikiswa. Ewe mandibeke ingqondo yakho ngokukhululeka.
Okwam Iresiphi elula yebhotoloyali ilula kakhulu, kunokuba kukukopa. Mane ubeke zonke izithako kwisitya, usibethe de kube lula nokukhanya. Emva koko mayidibanise ezantsi kunye nokuncamathisela kwesimbo semizuzu eli-10 ukulahla amaqamza.
I-Voila, i-buttercream elula ngokulula.
Kwaye indlela, indlela, INDLELA engcono kunaleyo iqabaka evela kwitoti. Yintoni na loo nto?
Olunye ukhetho olukhulu lwekhephu lwakho
I-cream ezinqabileyo ze-cream
Ukuzinza ukhilimu otyhidiweyo (Kulungile kwiikeyiki zenqanaba elinye ngaphandle kokuthanda)
Ingcebiso # 5 ngendlela yokwenza ibhokisi udibanise incasa eyenziwe ekhaya
Yaphambana ngokuzaliswa okuthile! Usenokungafuni ukwenza ikhekhe lakho ekuqaleni kodwa uninzi lokuzaliswa kwekhekhe lunokwenziwa kwangoko kwaye zilula kakhulu.
Uyenza njani iibhere ezinzima
Zama oku kuzaliswa okumnandi kwikhekhe lakho
Ukuzaliswa kweCoconut pecan
Yabona, kwakungekho nzima kangako? Usendleleni uyokwenza ikeyiki emnandi eyenziwe ngebhokisi. Ngaba unazo iingcebiso zokwenza ibhokisi yakho ixube incasa eyenziwe ekhaya? Bayeke kwizimvo!
Iresiphi yeCake yeCake Recipe (WASC)
Umxube wekhekhe osetyenzisiweyo osetyenziswa kakuhle ngababhaki kwihlabathi liphela ovelisa ikeyiki emhlophe emnandi enencasa phantse njengokuqala. Le recipe yenza ii-cake ze-6'x2 'okanye ii-8'x2' zekhekhe Ixesha lokulungiselela:10 imiz Ixesha lokupheka:30 imiz Ixesha lilonke:40 imiz Iikhalori:747kcal
▢1 ibhokisi (1 ibhokisi) ikhekhe emhlophe Ndiyazithanda iihin duncan
▢5 oz (142 g) Umgubo we-AP 1 indebe (ichithwe kwindebe, ayifakwanga)
▢7 oz (198 g) iswekile eninzi 1 indebe
▢1/4 tsp ityuwa
▢9 oz (255 g) ikrimu emuncu 1 indebe yegumbi temp
▢4 oz (113 g) ibhotolo enyibilikile 1/2 indebe
▢8 oz (227 g) ubisi 1 ikomityi yegumbi lobushushu
▢4 inkulu (4) abamhlophe beqanda ubushushu begumbi
▢1/2 tsp (1 tsp) isicatshulwa som-amangile
Imiyalelo yale khekhe ilula kakhulu. Ngokusisiseko, beka zonke izithako kwisitya kwaye uzixube ngesantya esiphakathi kwimizuzu emi-2! Voila! Ibetter cake ilungile. Thela ibatter kwiipani ezimbini ezilungisiweyo ze-8 kwaye ubhake kwi-350ºF imizuzu engama-30-35 okanye de kufakwe i-toothpick ecocekileyo
Sukuba nexhala malunga naziphi na izithako ezingasemva kwebhokisi, sebenzisa nje izithako ezidweliswe kwiresiphi. Le recipe yenza i-batter eyaneleyo yeebhaki ezintathu ze-6'x2 'okanye ezimbini ze-8'x2' (ngeenxa zonke). Le recipe yenza amaqebelengwane angama-40 kunye nee-ounces eziyi-1.25 zebhetter kwi-cupcake tin. Ungawatshintsha amaqanda ama-4 amaqanda abamhlophe ngamaqanda amathathu apheleleyo ukuba unqwenela
Ukukhonza:1g|Iikhalori:747kcal(37%)|IiCarbohydrate:120g(40%)|Iprotheni:8g(16%)|Amafutha:26g(40%)|Amafutha agcweleyo:Shumi elinantlanug(75%)|Icholesterol:60mg(Amashumi amabini%)|Isodium:895mg(37%)|Potassium:162mg(5%)|Ifayibha:1g(4%)|Iswekile:70g(78%)|Vitamin A:710IU(14%)|Vitamin C:0.3mg|Ikhalsiyam:239mg(24%)|Intsimbi:2.7mg(Shumi elinantlanu%)
Uyenza njani imihombiso ethandekayo yekhekhe
ikeyiki sitrobheli usebenzisa umxube ikeyiki emthubi
ukufuna ulonwabo kuya kuba ngumkhandi